Ixesha elizayo leVidiyo eshukumayo kunye noPhando lilapha! | Martech Zone
Ixesha elizayo leVidiyo eshukumayo kunye noPhando lilapha!
NgoLwesithathu, Julayi 15, 2009 NgoMgqibelo, Julayi 12, 2014 Douglas Karr
Oku kuyamangalisa kwaye kungumdlalo otshintsha kwimarike eshukumayo. Ukulala isungule eNetherlands. UDuke omde Ndithumele ikhonkco kule teknoloji intsha… uLayar uyibiza ngokuba ngumkhangeli zincwadi ohambisayo ongathandwayo. Ndikubiza ngokuba lixesha elizayo!
Ukubeka sisicelo sasimahla kwifowuni yakho ephathekayo ebonisa oko kukungqongileyo ngokubonisa ulwazi lwedijithali yexesha langempela ngaphezulu kwenyani ngokusebenzisa ikhamera yefowuni yakho ephathekayo.
Ukubeka kuyafumaneka kwi-T-Mobile G1, kwi-HTC Magic kunye nezinye Android iifowuni kwi I-Android Market yeNetherlands. Amanye amazwe aza kongezwa kamva. Imihla yokukhutshwa kokucwangciswa kwamanye amazwe ayaziwa okwangoku.
Ukuba awuyiboni ividiyo kule post, qiniseka ukucofa kuyo ukuze ubone eyokuqala iselfowuni eyongeziweyo eyinyani! Ingqondo yam ibaleka ngamathuba amahle wetekhnoloji enje!
tags: AndroidNyaniso eyongeziweyog1htc umlingoulalaUkuThengiswa kweMfono kunye neThebhulethit-iselfowuniIselfowuni g-1
Ngaba konke malunga neKhowudi enokuphinda isebenze? er… Umxholo
Jul 16, 2009 ngo-12: 42 AM
Isiqwenga esimangalisayo sesoftware. Nawuphi na umbono wokuba bayenza njani?
Jul 16, 2009 ngo-1: 29 AM
Kubonakala ngathi ludibaniso lweGPS kunye nevidiyo, uAdam. Ngokwenene kuyamangalisa. Khawufane ucinge ngale mveliso kunye nobuso. Endaweni yokuba ndilibale amagama abantu, ndingabonisa incwadi yam yeedilesi!
Jul 16, 2009 ngo-2: 27 PM
Yidemo ebalaseleyo- kodwa ilapha njengakwilebhu kwindawo ethile.
Ndiyayibona ngokulula le nto yenziwe kwi-iPhone. Esi sitshixo se-azimuth basibeka apho kunye neKhamera kunye neGPS iya kwenza ezinye iinkqubo ezimangalisayo ze-methinks.